Voalaza fa efa narary izy ary nisy nivonto foana teo amin’ny tendany. Tsy voatsabo izany satria somary sahirana ara-pivelomana izy ireo. Nipetrapetraka niaraka tamin’ny mpiray tanàna taminy izy omaly atoandro teo akaikin’ny toeram-pivoahana iraisan’ny daholobe teo Andravoahangy no nitaraina tamin’ny namany fa marary ka ento any amin’ny hopitaly, hoy hatrany ny fanazavana. Somary nitambokona nanao “Croiser les bras”izy. Tsy dia taitra loatra anefa ireo namany satria nihevitra fa nananihany ity tovolahy ity. Tampoka teo anefa, dia nikohaka izy ary ra be sy lio no nivoaka, izay vao nikorapaka ny rehetra. Tsy tana anefa ny ainy, ary tsy nisy fialana nenina azo natao, fa fotoana fohy dia maty ity tovolahy ity. Tetsy Andravoahangy Mandialaza eny amin’ny manodidina ny Rotsirotsy iny no nisehoan’ity tranga ity omaly. Nisy ny resaka niely fa nihinana hani-masaka avy aman'olona sendra nandalo teny an-dalambe no nahafaty azy. Tsy izay anefa no zavatra tena nisy, araka ny fanazavana etsy ambony.